Imimmiselo nemiqathango -
YONKE IMITHETHO, IMIGAQO, NEEMIGOMO ELAWULO LWE-WEBSITE YAMANDLA YAMAZIKO ANGAKHONA KUNYE INKQUBO YOKUTSHINTSHA NGAPHAKAZI. NGOKUPHATHWA KWE SITE UYAVUMELANA NEMIGAQO, IMITHETHO, NEEMIGOMO.
Ngokufikelela kule webhusayithi, uyavuma ukuba ubophelelwe yiMigomo neMibandela yokuSebenzisa, yonke imigaqo nemimiselo esebenzayo, kwaye uyavuma ukuba unembopheleleko yokuthotyelwa kwayo nayiphi na imithetho efanelekileyo yendawo. Ukuba awuvumelani naliphi na le migaqo, awuvumelekanga ukusebenzisa okanye ukufikelela kule sayithi. Izinto eziqulethwe kule webhusayithi zikhuselwe ngumthetho we-copyright kunye nomthetho wecandelo lorhweba.
2. Policy Shipping
UKUSEBENZISWA KWE-DOMESTIC (US i-oda kuphela)
Sithumela yonke imiyalelo nge-United States Postal Service (www.USPS.com)
Kuba zonke iilayali ezibekwe eUnited States zivumele ukuba zivumele Iintsuku ze-7-9 zeentsuku ukususela ngomhla wokuhlawulwa kwakho fumana yakho ipakethi (ngeveki neeeholide azibonakali njengeentsuku zoshishino). Lo kuphela uqikelelo olusekelwe kwixesha lokuthunyelwa kwexesha eliqhelekileyo kwaye ngoko ke lunokuba luninzi okanye lufutshane kuneentsuku zeentsuku ze-7-9.
Ixesha lokucwangcisa i-5-6 iintsuku Ukuthumela ii-2-3 iintsuku ezibangele i-7-9 yeentsuku zoshishino. Oku kuphela uqikelelo olusekelwe kwixesha lokuthumela kunye nexesha lokucwangcisa kwaye linokuba lude okanye lifutshane kuneentsuku ze-7-9 ezikhankanywe.
Ukuba uyalela ukuvalwa okanye nayiphi na inkonzo esinika yona le-ETA iya kuba yinde ngaphezu kokukhankanywe.
Afro I-Kinky iya kufuna ixesha elide lokusebenza.
Ngexesha leeholide kunye nokuthengisa / imihla yokunyusa ngokuqhelekileyo i-1-3 yosuku lokushishina lugqityiweyo ngenxa yokusebenza kwemali.
Izinombolo zokulandelela ziya kuthunyelwa kuzo zonke iilaydi emva kwexesha elivumelekileyo lokucwangcisa.
Izandiso zeeNdleko zeNdalo azikho uxanduva lwepakethi ezilahlekileyo okanye ezibiweyo kwinkqubo yokuthumela. Asibuyiseli abathengi kwiipakethi ezilahlekileyo okanye ezibiwe ngenxa yeemeko ezingalindelekanga eziphuma kwi-My Natural Hair Extensions. Ukuba ungathanda ukufaka i-inshurensi kwiphakheji yakho nceda ubize okanye usithumelele i-imeyile ngaphambi kokuba ubeke umyalelo wakho.
Nceda ubeke umyalelo ngomhla oza kunika ixesha elaneleyo lokufumana umyalelo wakho phambi kokuba uqeshwe ngeenwele. Ixesha lokucwangcisa alikwazi ukuhanjiswa okanye lichazwe. Nangona kunjalo ixesha lokuthumela lingaboniswa.
IZIKHONO ZEMIHLABA (onke amazwe ngaphandle kwe-US)
Ngokuba yonke imiyalelo efakwe kwamanye amazwe nceda uvumele ii-5-6 iintsuku zokucwangcisa kwaye siza kufaka inombolo yokulandelela kwindlela yakho. Ixesha lokuthumela liyahluka nganye kwindawo.
Imiyalelo iya kuthunyelwa nge UPS (www.UPS.com) Iindleko zokuthumela ziyahluka kwindawo nganye.
Ukuthumela kunokuvela kwi-20 $ - $ 65 yama-oda wamazwe ngamazwe.
Asinabangela nayiphi na iphakheji elahlekileyo okanye eyebiwe kwinkqubo yokuthumela. Asibuyiseli abathengi kwiipakheji ezilahlekileyo okanye ezibiwe ngenxa yeemeko ezingalindelekanga eziphuma kwi-My Natural Hair Extensions Control. Ukuba ungathanda ukufaka i-inshurensi kwiphakheji yakho nceda ubize okanye usithumelele i-imeyile ngaphambi kokuba ubeke umyalelo wakho.
3. Inkqubo yokubuyiselwa kwemali
Izinto eziphathekayo kwi-MyNaturalHairExtensions.com zinikezwa "njengoko kunjalo". Senza iziqinisekiso, zichazwe okanye zichazwe kwaye ziyakhupha zonke ezinye iziqinisekiso, kubandakanywa kodwa ngaphandle kwemida kuzo zonke iziqinisekiso eziqinisekisiweyo. Ngokuqhubekayo, i-Natural Hair Extensions Co. ayifuni okanye ayenze nayiphi na imbonakalo malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokwenzeka, okanye ukuthembeka kokusetyenziswa kwezixhobo kwi-intanethi ye-intanethi okanye nakwezinye izinto ezinxulumene nezinto ezinjalo okanye nakwephi na isayithi ezixhomekeke kule sayithi.
Izinto ezibonakalayo kwi-MyNaturalHairExtensions.com zingabandakanya ubugcisa, i-typographical, okanye iipositi zephoto. Asitsho okanye sichaza ukuba nayiphi na izinto ezikule ndawo yewebhu zichanekile, zizalisekile, okanye zikhoyo. I-Natural Hair Extensions Co. ingenza utshintsho kwizinto eziqulethwe kule webhsayithi kuquka nemimiselo nemiqathango yalo, umgaqo-nkqubo wokuthumela, ukubuyisela umgaqo-nkqubo nanini na ngaphandle kwesaziso. Kodwa-ke, asiyizibophelelo zokuhlaziya izixhobo. I-Hair Natural Extensions Co. ingabuyisela kwakhona le migaqo yokusetyenziswa kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uvuma ukuboshwa ngenguqu yangoku yale Migaqo neMeko yokuSebenza.